ऐतिहासिक मानिएको नेपालकै पहिलो ‘अण्डरपास’: कहिलेदेखि आउदैँछ सञ्चालनमा ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार ऐतिहासिक मानिएको नेपालकै पहिलो ‘अण्डरपास’: कहिलेदेखि आउदैँछ सञ्चालनमा ?
on: ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:०९ In: समाचारTags: ऐतिहासिक मानिएको नेपालकै पहिलो ‘अण्डरपास’: कहिलेदेखि आउदैँछ सञ्चालनमा ?No Comments
काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माणमा ऐतिहासिक मानिएको नेपालकै पहिलो ‘अण्डरपास’ असार दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
असार दोस्रो सातासम्म कलङ्की–बाफल भागको ४०० मिटर ‘फिनिसिङ’ को काम सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको आयोजना प्रमुख प्रकाश भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए। यो संगै कोटेश्वर–बल्खुपुल–कलङ्की १० दशमलव चार किमी सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नौ किमिको काम सम्पन्न भई एक दशमलव चार किमीको काम मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
“कोटेश्वर–बल्खुपुलको सबै काम सम्पन्न भएको छ, बल्खुपुलबाट कलङ्कीसम्म सडक विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको छ, मंसिरसम्म सबै काम सकेर सडक हस्तान्तरण हुन्छ”–उनले भने ।
Tags: ऐतिहासिक मानिएको नेपालकै पहिलो ‘अण्डरपास’: कहिलेदेखि आउदैँछ सञ्चालनमा ?
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १७:०९